ဒီဇိုင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်အားကစားပြိုင်ပွဲများအားလုံး၏သုံးသပ်ချက်များ - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> အားကစားပြိုင်ပွဲ
လူတိုင်းကဂိမ်းကိုကြိုက်တယ်။ ထိုအခါကောင်းတစ် ဦး ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းချိတ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဂိမ်းကစားသူဖြစ်ပါကဤအပိုင်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ ငါကပို။ ပို။ အရာကြိုးစားနေသူရိုးရှင်းသောဝါသနာဖြစ်၏။
ရည်ရွယ်ချက်မှာအပိုင်းကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်စမ်းသပ်နေသည့်ဂိမ်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်ဂိမ်းများဖန်တီးခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏ဆောက်လုပ်ရေး၊ အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မည်သည့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုရမည်စသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကနေ DIY အရာအားလုံး။
ထို့အပြင်၊ ဂန္ထဝင်စစ်တုရင်၊ Backgammon၊ Mankala၊ အွန်လိုင်းပဟေlesိများအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကစားနေသည့်ကစားနည်းများ၏တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်သမိုင်း၊ စည်းမျဉ်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်သင်ခန်းစာများနေရာချထားခြင်း။ တစ်ခု။
များအတွက်အထူးအပိုင်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါ ;-)
ဒီနှစ်မှာငါနှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံပြီးဖြစ်သည် ကျေးလက်ပွဲတော်များတွင်ကလေးများအတွက်ဂန္ထဝင်ဂိမ်းများနှင့်စီးနင်းခြင်းလှုပ်ရှားမှုများ။ ၎င်းသည်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဂိမ်းများ၊ အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအရာများဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ တချို့ကတစ်ယောက်တည်းကစားရမည်၊ အချို့သည်အတွဲလိုက်သို့မဟုတ်အဖွဲ့လိုက်လုပ်ရန်
အိမ်ပြင်ထွက်ခြင်းကြောင့်ပျက်စီးနေသောတောအုပ်အားသာချက်ကိုယူပြီးကျွန်ုပ်၏သမီးများ၊ တူမများနှင့်အတူကစားနိုင်စေရန်နွေရာသီအတွက်အချို့သောအမိုးများကိုတပ်ဆင်လိုသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ခဲ့သူများနှင့်ကျွန်ုပ်မှတ်မိခဲ့သူများစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ငါအရမ်းများတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့နေ့ကငါဓာတ်ပုံရိုက်လို့မရဘူး။ အားလုံးဂိမ်းများအတွက်ကျနော်တို့စည်းမျဉ်းများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်မူကွဲနှစ် ဦး စလုံးမူကွဲများအများအပြားလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါမှတ်စုများကိုသတိပေးချက်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
သငျသညျဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအတူကောင်းသော gymkhana ရှိနိုင်ပါသည်။ ငါဂိမ်းများကို 2, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်မော်တာနှင့်ချိန်ခွင်လျှာလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ကြောင်းသူတို့အားခွဲခြား။
Jenga စည်းကမ်းများ (Jenga ကစားနည်း)
Jenga ၎င်းသည်သစ်သားလုပ်ကွက် ၅၄ ခုနှင့်ကစားသည်၊ အရှည်သည် ၃ ဆပိုသည်။ အဆိုပါလုပ်ကွက်မျှော်စင်ဖွဲ့စည်း stacked နေကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကြမ်းပြင်သုံးခုရှိပါတယ်, နှင့်အပေါ်ဆုံးအထပ် perpendicular ထား၏။ ထို့ကြောင့်အဆုံးတွင် ၁၈ ထပ်ရှိသည်။ သို့သော်ပုံတစ်ပုံနှင့် ပို၍ ကြည့်နိုင်သည်။
သငျသညျlikeကန်အမှန်ဂိမ်းကြိုက်လျှင် Suspend ကိုလည်း ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။
မျှော်စင်ဆောက်ပြီးတာနဲ့မျှော်စင်ဆောက်သူကဂိမ်းကိုစလိုက်တယ်။ ဤတွင်လှုပ်ရှားမှုများသည်မည်သည့်ကြမ်းပြင်မှလုပ်ကွက်ကိုမဆိုယူပြီးမျှော်စင်ထိပ်တွင်သပ်သပ်ရပ်ရပ်နေရာချခြင်းဖြစ်သည်။ ။
Rubik's cube2×2ကိုကလေးများကတည်ဆောက်ရမည်
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမူလတန်းကျောင်းဆရာဒေးဗစ်ကကျွန်ုပ်ကိုသူတို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်မလားဟုမေးခဲ့သည် ကလေးများအတွက်2×2rubik ၏ cube ဒီဇိုင်း.
သူတို့ကလုပ်ချင်တယ် Rubik's cube ပတ်လည်ရှိကလေးများအတွက်သင်္ချာစီမံကိန်း ။ ငါချက်ချင်းသူ့ကိုတည်ဆောက်ရန်ပစ္စည်းများပေးပို့ခဲ့သည် အန်စာတုံးနှင့်အတူသံလိုက် rubik ရဲ့ Cubeအဆိုပါ2×2နှင့်3×3ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကမတူကြဘူး။
၎င်းကိုအသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်လူငယ်များကတည်ဆောက်ရမည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစိတ်ကျသောအန္တရာယ်ရှိသောကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုမေ့သွားသည်
အရာအားလုံးကိုပြောရမယ်ဆိုပေမယ့်သူတို့ကအနည်းဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့ cube ကိုပဲလိုချင်ကြတယ်။
ငါ့အဖြေကဒီ Rubik ၏ကတ်ထူပြားနှင့်သံလိုက်စက္ကူ ၂ × ၂ အကယ်၍ သင်ကအတန်းတစ်ခုအတွက်လုပ်ရင်ပုံးတစ်ခွက်လျှင်ယူရို ၁.၅ ကုန်ကျမည်၊ သင်သာယူလိုလျှင်ယူရို ၃၊ ၄ သို့ယူရမည်။
ရှစ်ရှစ်လုံးရဲ့ထူးခြားချက်က ၁၀၀၀ ဖြစ်ချင်တယ်
သောကြာနေ့တွေမှာနက်နဲသောအရာများ၊ နက်နဲသောအရာများ၊ ဂိမ်းများသို့မဟုတ် ဦး နှောက်တီဇီတင်များတင်ပို့ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြာမြင့်စွာကတည်းကရပ်နားခဲ့သည်။ ဒါကလွယ်ကူသင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ... အပေါ် Read
စနေ၊ တနင်္ဂနွေကောင်းရင်မင်းကဒီဟာကိုမခက်ခဲပေမယ့်ဒီသင်္ကေတလေးကိုချန်ထားလိုက်တယ်။ အပေါ် Read
1x2x3 rubik's cube ပြုလုပ်နည်း
Ruby's Cube သည် 3x2x1 cube ဖြင့်ကစားနိုင်စေရန်ဟက်ဟက်သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။
အန်စာတုံးနှင့်အတူသံလိုက် Rubik ရဲ့တုံးလုပ်နည်း
သင်ဒါကြိုက်တယ် အန်စာတုံးဖြင့်လုပ်သောသံလိုက် Rubik ၏တုံး?
MIT - သော့ခတ်သောသမ္မာကျမ်းစာ
ကျွန်ုပ်တို့သည် MIT ၏ဘာသာပြန်အဖြစ်ပူးတွဲတင်ပြထားသည် သမ္မာကျမ်းစာကို Lockpicking ။
ပိုကောင်းတဲ့အသံတစ်ခုခုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၊ မရှိမဖြစ်စာရွက်စာတမ်း အတွက် သော့ခတ်မှစတင်။ ဒါဟာငါ့အာရုံကိုဖမ်းသောဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကသော့ခ်လုပ်တဲ့အလုပ်အကြောင်းပြောရင်အဲဒါကိုလုံးဝလက်ခံတယ်။ ငါတို့မူကား၊
ခိုင်မြဲသော Pulse ဂိမ်း
ယနေ့အချိန်မှာ Akal Ediciones မှ James Garratt ရေးသားသောကျွန်ုပ်၏ ESO ဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာစာအုပ်ကိုကျွန်တော်မတော်တဆတွေ့မိသည်။ ... အပေါ် Read
ကျနော်တို့ Jenga နှင့်၎င်း၏အကြောင်းပြောဆိုပြီးပြီ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို Ikkaro ထဲတွင်။ အကယ်စင်စစ်သင်၌များစွာသောကစားခဲ့ကြပါပြီ, ဤ entry ကိုချစ်ကြလိမ့်မည်သူ Jenga ကစားသမား, (တစ်ခါတစ်ရံ Infernal Tower ဟုခေါ်သည်) ဖြစ်ကြသည်။
သင်ခန်းစာတွင်ရော်ဘာကြိုးဖြင့်မောင်းနှင်သောပစ္စတိုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း Jenga ကစားသည်။ ဒါဟာအိမ်လုပ်သစ်သားပစ္စတိုဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဖြင့်မသုံးဘဲ၎င်းတို့မည်မျှရှုပ်ထွေးနေစေကာမူ၎င်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အပိုင်းပိုင်းများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။